Mutauro Chii unotaurwa muna Canada: Chirungu kana French?
Kuenda, Travel Tips
Canada - imwe nyika iri North America, kuunganidzwa dzakasiyana uye mitauro. On Ndima yayo, nyika pokutanga wechipiri pashure Russia.
The yapera nyaya munyika yanhasi
Gore negore kuuya pano kwete zviuru, asi mazana ezviuru vaifamba. Vamwe vavo vanowanzotevedzera nekusangana vemo netsika, uye mumwe anofanira kushanyira hama. Kune vaya vakasarudza kutamira pano zvachose.
mutauro Chii unotaurwa Canada? Mhinduro yomubvunzo uyu kuti, sezvo mutemo, zvinodiwa nomumwe pamusoro mhando.
Zvakangoitikawo kuti Chirungu uye French ndiwe gurukota chinzvimbo munyika. Kunyange zvazvo zvinofanira kucherechedzwa kuti vanhu vakawanda vanoshandisa kutaura chete mumwe izvi mitauro.
The siyana tumitauro guru nechokuchamhembe nyika
"Muna Canada, taura Chirungu - sezvinoita vakawanda vangati. Zvino ndinofunga: 'Oh, zvichida haana, kana paine, French Uyewo dzakakurumbira ". Kutaura zvazviri, ndiro pfungwa. Nyika hombe, zvinonzi inogarwa nevanhu vakasiyana zvachose, saka hapana zvinoshamisa pakuti mitauro rivepo wandei.
Vagari munzvimbo dzakawanda Canada vachishandisa zvikurukuru Chirungu, inova musanganiswa American uye British emashoko. Kazhinji munhuwo mashoko kubva British bazi remutauro kungava isinganzwisisiki kuti vokuAmerica. Uye vamwe mashoko vari kutaurwa inotaura Chirungu vemo pamwe chairwo American madudziro emazwi. Mumaruwa Atlantic pamhenderekedzo iri kutaura akashandisa mhando dzakawanda pakati dzokuAustralia of Chirungu mutauro. Nyanzvi dzinofunga kuti izvi imhaka kare. Kare, kuvhima uye kuredza nemunharaunda munzvimbo akatungamirira upenyu oga uye aiva muduku kutaurirana nevamwe yawo.
In Montreal uye Vancouver, apo vanotama zhinji kubva China, unogona kazhinji kunzwa Chinese hurukuro. VokuCanada vari achinyatsogona mutauro Chirungu, vanenge vasingachafaniri bvunzo nechiFrench. Pasinei neizvi, vakawanda vari kudzidza nayo vakazvimirira nokuda kudiwa mabhizimisi muchikurukurirana, kana vavariro pachavo. In Canada, mitauro yakawanda vane pakutanga ari kudzidza. Kunyanya dzakakurumbira Spanish uye German. Zvakaratidza kuti mhinduro yakajeka kuti mubvunzo mutauro unotaurwa Canada, kunyange akaoma kupfuura pakutanga chiya.
Features zvomunharaunda bilingualism
Pari, nhamba chiFrench vokuCanada vakapfuura vanhu mamiriyoni manomwe, nekurangarira kwerinenge kota zvachose kwevanhu. A nzvimbo chaiyo iri mudunhu Quebec, pane zvinodiwa chiFrench, uye vane vagari kwenguva refu nguva kuedza ndichachipa mamiriro wechikoro. Uye chido ichi iguru zvokuti munguva ichangopfuura dzimba vagari vemo tingaona zvishoma dzakachinja mureza wenyika, rinobatanidza Canadian uye French.
For chiFrench kumatunhu zvinosanganisirawo kuchamhembe-okumabvazuva nyika Lake Ontario, nzvimbo yakapoteredza guta Winnipeg uye chikamu yemo nzvimbo pedyo Ottawa. E. Zvinoita sokuti Canada kutaura French zvakawanda zvinofadza chikamu vomuSouth.
Bilingualism muCanada zvinobva panguva enhoroondo ukama pakati Britain uye France, uyo akarwa nokuda Colonisation panzvimbo idzi. Zvose mitauro vakanga nyore zvaida kuti vatengesi kuti kukura pamusika ukama. Chii kunakidza, bilingualism zvakawanda zvakajairika mumatunhu avo umo chiFrench vagari kurarama. Uye zvinofadza ndechokuti vokuCanada vose vanofanira kutaura zvokukurukura Chirungu, asi vaitaura Chirungu vagari kwete hazvo kudzidza French.
Mitemo nokuti vatama
"Mutauro Chii unotaurwa muna Canada? Chii kudzidza pakutanga "-? Mibvunzo iyi ndiwo kukosha kune vaya vakasarudza kutamira Canada kuti zvachose dzokugara. Hazvishamisi, nokuti kamwe ipapo, unofanira kuti kwete chete kukurukura vomunzvimbo, asi kuti vashande kuti tiriritire pachavo uye vomumhuri dzavo.
Pamutemo bilingualism muCanada, asi 15 chete% anogona kutaura mumitauro miviri. Hurumende ari kuita zvose zvaanogona kuti dzichiri bilingualism munyika.
Nyaya dzemapepa mitauro miviri.
Vashandi vehurumende uye vashandi zvenhau vanofanira kukwanisa kutaura mumitauro yepamutemo.
Vanotaura Chirungu Vazhinji vokuCanada vanosarudza kusarudza vana vavo zvikoro, apo dzidziso nyaya iri kuitwa mu Chirungu nechiFrench.
vanotama Most kusvika zvachose kugara chiFrench zvikamu Canada vangasangana paunoitirwa kusanzwisisa. The klassiske French, vari kudzidza Russia ndiyo yakasiyana yomunharaunda mumwe.
Izvi romutauro pakutanga zvakaoma kukunda pasina ruzivo Chirungu. vanhu vakawanda kudzidza mutauro French zvakare. Uye vose ezvinhu zvakasikwa kuti chinangwa ichi. Pakuzadzisa bilingualism ane tarisiro huru uye anopa mikana yakawanda.
Zvakaratidza kuti mubvunzo mutauro unotaurwa Canada, hakusi chaizvo akarurama pfungwa. Zvingava nani kuzvibvunza kuti chii vanofanira neImba mitauro, kuti vanzwe vakasununguka munyika ino. Hongu, hongu, ndizvozvo, zvakanga pakutanga muzvizhinji, zvimwe nyore hazvishandi.
Solar Temberi Sergiya Radonezhskogo muna Solntsevo
WaMambo Beach, muCrimea: sei kuwana tsananguro, wongororo
Starokorsunskaya Mumusha Krasnodar Territory: tsananguro, mapikicha. Nhoroondo mumusha
Resorts pamusoro Tunisia. Description uye pikicha
Inzerskie zubchatki muna Bashkiria (mufananidzo)
"Divo-Ostrov" muSt Petersburg: yakanaka water park Russia
My huro urikanwi: Kunokonzerwa neMarapirwo
Lyrical mabasa: zvinhu, mhando, mienzaniso. Izwi rinoshanda ...
Products kuti chirwise chimiro wrinkles
Where kushambira ari Kubhabhatidzwa Moscow (mazita nzvimbo)
The injini upenyu, kana nokugadzirwa the Chinese
The yakanakisisa kurudziro uremu
Bhasikoro tai: chii, uye sei kusarudza zvakanaka
Cat fluke: nzira chirwere, zviratidzo uye kurapwa
Chii chinonzi chikepe chikepe? Ichifamba-urongwa. Mnogopalubnoe guru nechikepe chikepe
Colorants nokuti kongiri, mavara kongiri uye kushandisa nzira staining.
Trendy zvikabudura 2011 vakadzi: akasununguka uye seksikäs
Life Path Bo Andersson